Ny rindranasan'ny Gmail dia mandray widgets | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo zava-baovao farany ampiasaintsika rehetra ao amin'ny iOS 14 ny widgets. Rehefa lasa ny herinandro taorian'ny famoahana ny kinova farany an'ny iOS 14, dia mihamaro hatrany ireo fampiharana dia havaozina mba hahazoana tombony betsaka amin'izany amin'ny rindranasao amin'ny alàlan'ny widgets.
Ireo tovolahy ao amin'ny Google, dia namoaka vaovao farany momba ny rindranasan'ny Gmail, hampiasa ireo widgets, widgets azontsika apetraka amin'ny efijery an-trano na ao amin'ilay faritra eo ankavia amin'ny fitaovantsika. Ny zavatra voalohany tsy maintsy ataontsika dia ny manavao ny kinova farany an'ny Gmail ary miandry an'i Google hampihetsika azy io avy amin'ny mpizara araka MacRumors.
Mba hanampiana ny widget dia tsy maintsy manova ny efijery an-trano mitendry fampiharana ary misafidy ny efijery fanovana an-trano. Amin'izay fotoana izay dia hitodika ireo sary famantarana ny rafitra bailar ary tsindrio ny marika miampy miorina eo amin'ny zoro ambony ambony.
Ireo widgets izay ananantsika dia haseho eto ambany ary aiza no tokony hahitana ireo vaovao izay nampidirin'i Gmail. Ny widget Gmail dia mamela antsika manorata mailaka vaovao, jereo ny isan'ny mailaka mbola tsy novakinay ary manatanteraka fikarohana amin'ny kaontinay. Izay ihany, tsy misy safidy azo atao intsony.
Raha jerena voalohany dia toa tsy misy ilana azy ity widget ity, satria maro amintsika no manantena ny ho afaka midira amin'ny lisitry ny mailaka voarainay. Izany dia satria tsy avelan'ny Apple hampiseho ny atin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny widgets, zavatra izay amin'ny Android raha azo atao.
Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatray raha mandeha ny tetik'i Google ampio fiasa vaovao amin'ity widget ity, fa amin'izao fotoana izao dia toa hijanona toy izany hatrany. Ny widget misy amin'ny Android dia mampiseho amintsika ireo mailaka farany voarainay, zavatra izay tsy avelan'ny torolalana Apple, noho izany tsy misy ho an'ny iOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny app Gmail dia mandray widgets